Landa iphepha lodonga ngomfanekiso wegama elingukhiye le-Apple | Ngivela kwa-mac
Landa iphepha lodonga ngomfanekiso wegama elingukhiye le-Apple
Okwamanje sekusele izinsuku ezi-5 ukwethulwa ngokusemthethweni kwe-iPhone 7 entsha ne-iPhone 7 PlusKungakho sifuna ukwabelana nawe ngaso sonke iphepha lodonga i-Apple elisinikeze lona ngesimemo salo mcimbi esiqinisekiswe ngoSepthemba 7. Kumele sisho ukuthi lesi sithombe sangemuva siyatholakala nge-iPhone, i-iPad kanye naku-Mac. I-Apple ngeke ikhiphe imininingwane esemthethweni ye-iPhone 7 yayo entsha kuze kube usuku lokwethulwa kwayo kepha ukuvuza namahemuhemu esiwabona kulezi zinsuku kuwebhu nathi kancane esimweni sokuthi izinto zinjani. Kusele okuncane kwesethulo ngakho-ke ngenkathi sizokwabelana nawe ngomfanekiso wesimemo somcimbi ozosisebenzisa njengesizinda kumadivayisi ethu.
Kule folda sishiya bonke osayizi abakhona balesi sizinda ukuthi inikeza lo mphumela we- "bokeh" owaziswa kakhulu yibo bonke abathandi bezithombe nokuthi ungafuna ukusho okuthile ngekhamera ye-iPhone entsha. Abanye abasebenzisi nemithombo yezindaba ekhethekile bebelokhu benemininingwane yesithombe ukuthola imikhondo engaba khona mayelana nokuthi abafana baseCupertino bazosethulela ini kulo mcimbi, kepha asikholwa ukuthi bekunje ngaphambili kunalokho uma besinike izinkomba ezimbalwa izimemo zokuthi Noma kungahle kubonise ezinye zezinto ezintsha.
Ifolda nakho konke Izithombe ngosayizi ofanele we-iPhone, i-iPad ne-Mac Uzobathola kulesi sixhumanisi esifanayo. Siyethemba uyabathanda nokuthi i-Apple izosimangaza ngale nkulumo eyisihluthulelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » Landa iphepha lodonga ngomfanekiso wegama elingukhiye le-Apple
Ikucela ukhiye wokubethela
UGer Zarate kusho
Uyini ukhiye wokubethela?
Phendula uGer Zárate
cela ukhiye wokubethela
Qhubeka ubuze ukhiye wokubethela